Alao ny fotoana tsara indrindra ary ahodino amin'ny sarin-tsarinao | Famoronana an-tserasera
Ny fakana sary dia zavatra ataon'ny tsirairay mandritra ny andro. Ny zava-misy fa misy fakan-tsary ny telefaona dia ahafahana manana fitaovana iray ahafahana mamelombelona ny fotoana iainan'ny fiainana andavanandro. Ary na dia Izahay tsy mametraka ny sary rehetra alainay sary ao anaty taratasy, eny marina izany sary pirinty mbola zavatra atao io, na dia efa notsimbininay ho vitsivitsy aza.
Fa inona no tokony hotadidinao fa hanonta sary? Ahoana no tokony hisy azy ireo? Inona avy ireo fomba fanontana azy ireo? Hiresaka aminao momba izany rehetra izany izahay sy ny maro hafa eto ambany.
1 Fomba ahazoana maka fotoana tsara indrindra amin'ny fomba mety indrindra
1.2 Mitadiava fanampiana
1.3 Mitandrema amin'ny zoom
1.4 Ny jiro, voajanahary tsara kokoa
1.5 Makà sary maro
2 Ny kanto famerenana ny sarinao alohan'ny fanontana
3 Fanontana sary: ​​ahoana ary aiza no hanaovana azy
Fomba ahazoana maka fotoana tsara indrindra amin'ny fomba mety indrindra
Alohan'ny hanontana sary dia mila maka azy ireo, sa tsy izany? Ary matetika, tsy azo atao izany satria tsy lasa tsara ny sary nalainao. Rehefa zavatra azo averina izy io dia tsy misy zavatra mitranga, fa ahoana kosa raha nanisy fotoana tsy manam-paharoa ianao ary rehefa hitanao ny niafaran'ny sary dia tsapanao fa tsy mety izany?
Manatanteraka andian-dahatsoratra toro-hevitra amin'ny fakana sary tsara Io no zavatra voalohany tokony ho raisinao, indrindra raha te hanonta azy ireo ianao any aoriana. Anisan'ireny, ireo izay tena atolotray anay indrindra dia:
Ilaina tokoa ny tsy manandrana maka sary maika satria tsy ho azonao ny tena fototr'io fotoana io. Indraindray, mitazona ny fihetsikao hahazoana fotoana mety indrindra dia ny zava-drehetra.
Ohatra, amin'ny tranga biby fiompy dia mirona mihetsika be izy ireo indraindray saingy misy fotoana, rehefa segondra dia atolotray anao ny sary nofinofy. Ary raha miomana ianao dia afaka mahazo azy.
Rehefa tsy maintsy maka sary tsara ianao dia ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga aminao dia ny manjavozavo, mivalona sns. Ie? Amin'ity tranga ity dia voavaha izany amin'ny alàlan'ny fitadiavana fanohanana ka aza afindra ny polonganao na tazomy ny paozy lava kokoa.
Amin'izay ianao dia afaka maka sary tsy misy fampangovitana tanana mahazatra.
Mitandrema amin'ny zoom
Betsaka ny olona mampiasa zoom satria raha mijery ny zavatra akaiky kokoa izy ireo dia afaka misambotra tsara kokoa ny fotoana. Fa io no zavatra ratsy indrindra azonao atao. Ary izany ve Amin'ny zoom dia ho very ny kalitao ianao ary hampiseho ny sary manjavozavo, pixelated ary tsy mety amin'ny fanontana.
Ny vahaolana dia ny maka sary mahazatra, ary avy eo rehefa manitsy azy ianao dia andramo ilay zoom izay notadiavinao. Eny, ho asa bebe kokoa izany, fa ho mendrika ny tsy hahavery ny sary tadiavinao.
Ny jiro, voajanahary tsara kokoa
Betsaka no mamela ny jiro isaky ny maka sary izy ireo fa ny tena marina dia ny fampiasana ny flash dia mahatonga ny sary ho tsy voajanahary. Tsara kokoa ny toerana tsara, izay tsy anaovan'ny mifanohitra na ny jiro any aoriana ny azy ary miloka amin'ny hazavana voajanahary.
Aza adino fa miaraka amin'ny tselatra dia ho azonao aorina fotsiny ilay izy tselatra hazavana afaka manova loko.
Makà sary maro
Tadidinao ve ny fotoana nangatahan'ny mpaka sary anao hanao sary sy handre fa tsy maka sary iray fotsiny izy fa maro amin'izy ireo? Ataon'izy ireo izany hahazoana antoka fa ny iray amin'ireo halaina ho tonga sary tonga lafatra. Ary izany no antony tokony hanaovanao toy izany koa.
Raha ny marina dia amporisihanay izany ataovy amin'ny toerana sy safidy samihafa Satria, rehefa mandinika azy ireo ianao any aoriana, dia ho hitanao hoe iza no tsara indrindra tamin'ny rehetra ary safidinao io hivoaka amin'ny taratasy io.
Ny kanto famerenana ny sarinao alohan'ny fanontana
Ankehitriny rehefa vitanao ny sary, mieritreritra ve ianao fa tonga ny fotoana hanaovana pirinty azy ireo? Betsaka ny mandingana an'io dingana io ary io no zavatra ratsy indrindra azonao atao. Rehefa maka sary ianao, indraindray dia misy tsy fahalavorariana, mifanohitra amin'izany, loko, na zavatra sasany miseho ao, izay miafara amin'ny hahatonga ny endrika iray ho ratsy tarehy. Ka maninona raha mampiasa programa fanovana sary?
Ny dingana manaraka ho an'ny mpaka sary matihanina dia ny miasa amin'ireo sary nalainy hanandrana hanatsara azy ireo. Ary izany no tokony hataonao koa. SATRIA Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mahavita mandanjalanja amin'ny sary, fa tsy mivoaka miolakolaka, ahitsy ny fanamboarana, manatsara ny loko ...
Mazava ho azy, tsy maintsy mitandrina ianao mba tsy hanadino anay, indrindra satria afaka miala amin'ny sary tsy dia tonga lafatra ianao ka lasa very ny natiora sy ny realisme. Noho izany dia tsy maintsy tadidinao ny antonony, ny fifandanjana eo amin'ny "fahalavorariana" sy ny "voajanahary."
Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fandaharana sy rindranasa azonao atao amin'ny filalaovana sivana, ampio emotikon na zavatra mitovy amin'izany, apetaho frame, lahatsoratra sns izany dia ho fanampiny hatrany hanatsarana ny sary, raha mbola tsy mavesatra azy io ianao.
Fanontana sary: ​​ahoana ary aiza no hanaovana azy
Ny dingana farany sisa tavela eto dia ny momba ny fanontana sary. Talohan'izay dia nisy fivarotana maro ahafahanao mampivelatra horonan-tsarimihetsika ary na aiza na aiza, rehefa nanao izy ireo, raha tsara ny sary dia hiresaka aminao momba ny fanatsarana azy, ny fomba nahavariana azy ireo, sns. Saingy izao dia tena zara raha mahita ireny fivarotana ireny satria ny ankamaroany dia mampiasa fakan-tsary niomerika ary indrindra ny finday.
Na izany aza, misy ny safidy hanontana sary. Ohatra:
Amin'ny milina fanontana sary. Ao amin'ny sehatra lehibe dia mamela milina sasany izy ireo, amin'ny alàlan'ny fampidirana karatra fitadidiana SD, azonao atao ny manonta ireo sary tadiavinao ao anatin'ny minitra vitsy.
Ao amin'ny fivarotana sary. Izy ireo koa dia manana an'ireny masinina ireny, na ireo matihanina hafa kokoa, hanonta ireo sary.
Amin'ny alàlan'ny pejy an-tserasera. Eny, azo atao ny manao pirinty sary amin'ny Internet. Raha ny marina dia tsotra ny fizotrany: ampidiro ireo sary izay tianao hatao pirinty, aloavy ary ao anatin'ny andro vitsivitsy dia anananao ao an-trano izany.
Amin'ny fivarotana kopia. Mino izany na tsia, amin'ny fivarotana kopia, izany hoe any amin'ny magazay anaovanareo pirinty antontan-taratasy, dia azon'izy ireo atao ihany koa ny maka ny sary tadiavinao, miaraka amina taratasy misy sary tsara.
Ka raha manana sary hanonta ianao nefa tsy fantatrao ny fomba hanaovana azy dia ireto misy hevitra vitsivitsy hanaovana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Alao ny fotoana tsara indrindra ary alao amin'ny sary pirintinao